FOKONTANY ANTANIMALANDY : Manahy mafy ny amin’ny fiantsonan’ireo kamiao eny amin’ny Star Rn 4 ny mponina
Tsy manana alalana hiteny na hanome baiko mantsy ity sefo fokontany ity ka izay no mahatonga azy mampiaka-peo amin’ireo ambaratongam-pahefahana eto Mahajanga. 3 octobre 2017
Dradradradraina foana ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika, anefa tsy misy ny fandraisana andraikitra eny amin’iny faritra misy ny orinasa Star eny Antanimalandy Rn4 eny. Misy fiantsonana roa sosona, izany hoe ny andaniny sy ny ankilany dia feno kamiao lava be mpitatitra vokatry ny orinasa Star ireny avokoa manamorona ny Rn4, ka lasa manembantsembana ny fifamoivoizana.
Ahiana mafy ny hisian’ny loza satria lasa tery ny lalana no tsy misy lalan’ny mpandeha an-tongotra intsony. Noho io tranga mampimenomenona ny vahoaka io sy ireo seha-pitaterana an-tanety rehetra no ian-tsoan’i Fiarena, na i Tonga, sefo fokontany ao an-toerana ny tompon’andraikitra voakasik’izany ny amin’ny vahaolana, hisorohana amin’ny lozam-pifamoivoizana.
Ankoatr’izay dia angatahin’ity farany ihany koa ny ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny asa vaventy ny hijerena manokana ny lakandrano manamorona ny mosikey eo aminy garan-tsarety etsy bazary kely Sotema, satria miteraka fahadoboan’ny tanàna manodidina ny fahatsetseman’izany isan-taona, izay efa madiva ny ahatongavan’ny vanim-potoan’ny fahavaratra. Ary farany dia ny mba hanovàna ity fokontany ity ho kaominina mahaleotena, satria tokoa efa feno ireo mason-tsivana ilaina ny amin’izany, hoy hatrany i Tonga, sefo fokontany ao an-toerana. Marihina fa misy mponina 24 000 tsinjarain’ny vakim-paritra 7 ary manana velarana midadasika hatrany aminy 474 ha ity fokontanin’Antanimalandy ity.